ဗမာ့နိုင်ငံရေး ကသောင်းကနင်းများ (အပိုင်း ၁၀) – Myanma Daily
ဗမာ့နိုင်ငံရေး ကသောင်းကနင်းများ (အပိုင်း ၁၀)
အောင်ဆန်း – အက်တလီစာချုပ် – ပင်လုံညီလာခံ – အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရခြင်း
(The Political Turmoil In Burma ဟူသော အမည်ဖြင့် သမိုင်းစာစုကို ဆရာဦးဟန်ထွန်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး မင်းကောင်းချစ်မှ “ဗမာ့နိုင်ငံရေးကသောင်းကနင်းများ” အမည်နဲ့ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။)
လန်ဒန်မှာကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းမှုတရပ်အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာတောင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနဲ့ အလွှာအသီးသီးက ဗမာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ ဗမာ့ခေတ်သတင်းစာကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အိုင်စီအက်စ် ဦးတင်ထွဋ်လည်း တယောက်အပါအဝင် ဖြစ်တယ်။ ဦးတင်ထွဋ် အသတ်ခံရတဲ့အမှုဟာ ဒီနေ့အထိ လက်သည်မပေါ်သေးပါဘူး။ တချို့ပြောကြတာက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီး မယားငယ်ထား အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် သတင်းစာတွေထဲမှာ မီးခွက်မှုတ်တယ်လို့ ဖော်ပြခံရတဲ့ သခင်တင် လက်ချက်လို့ ဆိုကြတယ်။
ကျနော်ဟာ ရှေ့နေများရဲ့ ဘားကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သခင်ချစ်နဲ့ အလွန်ရင်းနှီးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သခင်ချစ်နဲ့ အရင်တုန်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး အခုအခါမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ၁၉၅၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ကျောင်းသားသပိတ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ရယ်၊ ဘားကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ဦးလေး ဦးဝင်းကြည်တို့ဟာ မန္တလေးကို ၁၉၇၀ ဝန်းကျင်များဆီတုန်းက သူတို့ အမှုကိစ္စတွေအတွက် ရောက်လာလေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့လာတိုင်း ကျနော့်အိမ်မှာ အမြဲတမ်းလိုလို ဧည့်ခံကျွေးမွေးရင်း ပြောကြဆိုကြရင် မဆုံးနိုင်အောင် ပြောဖြစ်ကြတာကတော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပါပဲ။ သခင်ချစ်ဟာ လန်ဒန်စည်းဝေးပွဲကို သခင်ဗစိန်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိအနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့သူပါ။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်လုပ်တဲ့ အဲဒီလန်ဒန်စည်းဝေးပွဲ အကြောင်းကို ကျနော်က ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သခင်ချစ်ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူက အဲဒီတုန်းက မြင်ကွင်းတွေကို ဒီလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အက်တလီတို့က ဆွေးနွေးပွဲမှာ စားပွဲတဖက်တချက်စီမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေ မိတ်ဆက်အပြီးမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စတင်ပြီး တနိုင်ငံလုံးကို လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပြောဆိုမှုဟာ အလွန်ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြောင်းနဲ့ အောင်မြင်အောင် မဖြစ်မနေ လုပ်မယ့်ဟန်က အထင်းသား ပေါ်လွင်နေခဲ့တယ်။ နန်းရင်းဝန် အက်တလီကတော့ နားထောင်ရုံသာ နားထောင်နေခဲ့ပြီး အဲဒီတောင်းဆိုဆွေးနွေးချက်အပေါ် ဘာအဖြေမှ မပေးခဲ့ဘူး။
ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်က ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယလက်အောက်ခံ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုသာ လက်ခံဖို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ဗမာကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်က တပြည်လုံးအတွက် လုံးလုံးလွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယအောက်မှာ မနေရေးကိုသာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့် နှစ်ဖက်လုံး သဘောတူညီတဲ့အဆင့်ကို မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဆွေးနွေးပွဲကို နောက်နေ့မှာ ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ ထပ်မံချိန်းဆိုခဲ့ကြတယ်။
ဗမာကိုယ်စားလှယ်တချို့က ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ တောင်းဆိုချက်အပေါ် အတော်စိုးရိမ်ခဲ့ကြတာကြောင့် သူတို့ဟာ သခင်ဗစိန်နဲ့ တခြားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဲဒီကိစ္စကို ဗိုလ်ချုပ်ကွယ်ရာမှာ တိုင်ပင်ပြီး တင်းမာမှုတွေ လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းက ဗြိတိသျှကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုလုပ်ပြီး အပေးအယူ အလျှော့အတင်း လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ နောက်တနေ့ မနက်ခင်း အစည်းအဝေးမှာတော့ အက်တလီက သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိကို လေသံတိမ်တိမ်လေးနဲ့ ဒါဟာ မင်း ငါ့ကို မနေ့ကပြခဲ့တဲ့ စာရွက်ပဲ မဟုတ်လားလို့ တိုးတိုးလေး မေးမြန်းခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ရေးအရာရှိက ခေါင်းကိုသာ ညိတ်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဗမာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အတိုက်အခံနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သခင်ဗစိန်နဲ့ ဂဠန်ဦးစောတို့ဟာ အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကို လက်မှတ်မရေးထိုးခဲ့ကြပါဘူး။
လန်ဒန်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေတုန်းမှာ “အောင်ဆန်းက ငါတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာ အရင်အတိုင်း ဆက်နေမယ်” ဆိုတဲ့ ကြေးနန်းစာတစောင်ဟာ မုန်တိုင်းပမာ ရုတ်တရက် ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကြေးနန်းစာဟာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီတွေ နောက်ခံပြုထားတဲ့ ရှမ်းစော်ဘွားအုပ်စုတွေထံက လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။
အဲဒီနောက် သိပ်မကြာခင် “ငါတို့ လွတ်လပ်ရေးလိုချင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ငါတို့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အစစ်အမှန်ပဲ” လို့ဆိုတဲ့ နောက်ထပ် ကြေးနန်းစာတစောင် ထပ်ရောက်လာတယ်။ အဲဒီကြေးနန်းစာကိုတော့ ရှမ်းပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က ပို့ခဲ့တယ်လို့ အရင်ဝန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်ပြီး တောင်ကြီးမြို့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် လင်းခေးဦးထွန်းမြင့် ပြောပြလို့ သိခဲ့ရတာပါ။ အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချူပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့ ကြေးနန်းစာတွေကိစ္စကို ဖြေရှင်းရတော့မှာပါ။
ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဗမာနိုင်ငံကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ ရှမ်းစော်ဘွားတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဗြိတိသျှ လေဘာပါတီအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အဆင့်မြင့်ရာထူးရှိတဲ့ ကိုလိုနီအရာရှိကြီးတွေ ရှေ့မှောက်မှာ နာမည်ကျော် ပင်လုံညီလာခံကြီးကို ကျင်းပနိုင်ဖို့ မဆိုင်းမတွ ကြိုးပမ်းခဲ့တော့တယ်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဘဏ္ဍာငွေကြေး သယံဇာတခွဲဝေမှု၊ ပြည်ထောင်စုမူ၊ ခွဲထွက်ခွင့် အစရှိတဲ့ ရှည်လျားပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ပြဿနာပေါင်းများစွာကို တနေ့လုံးနဲ့ တညလုံး အပြင်းအထန် ဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ကြရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အလွန်စိတ်ရှည်ရှည်ထား အပင်ပန်းအဆင်းရဲခံလို့ အဲဒီပြဿနာ အားလုံးကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ကြိုးပမ်းဆွေးနွေးလာကြရင်း အချိန်တိုတိုလေးသာ ကျန်တော့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ပိုင်း ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ လင်းအားကြီးအချိန် နံနက် ၄ နာရီလောက်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ လန်ဒန်စည်းဝေးပွဲတုန်းက သူ အဆိုပြုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယ လက်အောက်မခံရေးဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အဲဒီသဘောတူညီချက်ကို ရဖို့ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်ရင် ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကတိတခုကို အထူးသဖြင့် ရှမ်းစော်ဘွားတွေအတွက် ပေးခဲ့ရတယ်။
၁၀ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်တော့ အဲဒီခွဲထွက်ခွင့်ကို အကြောင်းပြုလို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးငယ်စု အမြောက်အမြားဟာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီကနေ့ အခြေအနေမှာတော့ ဗမာနိုင်ငံတွင်း ရှိရှိသမျှ လူမျိုးစုငယ်အားလုံးမှာ တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း နိုင်ငံတော်အာဏာကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ လုယူသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဟာ ဗမာတနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ပြန့်ပွားလောင်မြိုက်ခဲ့တာဟာ ပြည်တွင်းမှာသာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေထံ စစ်ဒဏ်ဟာ ကူးစက်ထိခိုက်လို့နေပါပြီ။
အဲဒီလို အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ လွတ်လပ်ရေးမကိုဋ်ပန်းကို ဆွတ်ခူးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပင်လုံညီလာခံကြီးကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၃၃ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုနေ့အဖြစ် အထိမ်းအမှတ်ပြု ကျင်းပခဲ့တာ ဒီနေ့အထိတိုင်အောင်ပါပဲ။ ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးတဲ့ထဲက လူတချို့ကို ကျနော် သိပါတယ်။ ဦးလဘန်ဂေါင်၊ ဦးထွန်းအေး(ရှမ်း)၊ ဦးခွန်ကြာဖြူ၊ ဦးထွန်းမြင့်(တောင်ကြီး)၊ လင်းခေးဦးထွန်းမြင့်၊ ဦးမန်းထွန်း(ပင်လုံ) စတဲ့သူတွေပါပဲ။
လွတ်လပ်ရေးအကြို ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးမှာ ဘုရင်ခံက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဝန်ကြီးချူပ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ အစိုးရအတွက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ပေးဖို့မှတပါး အခြားရွေးစရာလမ်း မရှိစေတော့တာက ဗိုလ်ချုပ်ရရှိထားတဲ့ လူသူအများ ကြည်ညိုလေးစား အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ပုံရိပ်အပြင် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာက ထောက်ခံနေကြတဲ့ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကြောင့်ပါပဲ။
ဗြိတိသျှတွေဟာ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဘမော်နဲ့ နောက်ဆုံး ဗြိတိသျှခေတ်က နန်းရင်းဝန် ဂဠန်ဦးစောတို့ကိုပါ လျစ်လျူရှုခဲ့ရပါတော့တယ်။ မျိုးချစ်ပါတီထောင်ခဲ့တဲ့ ဂဠန်ဦးစောရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ ကိုလိုနီအစိုးရရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ဟာ အကောင်အထည် ပေါ်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထိရောက်သွက်လက်ချောမွေ့စွာ အုပ်ချုပ် ဦးဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
(၂၃) အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံရခြင်း
ဦးစောရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အိပ်မက် ပျောက်ပျက်သွားခြင်းနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ မရောင့်ရဲနိုင်မှုတွေဟာ တနေ့တခြား တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန် အင်္ဂလန်မှာက ချာချီနဲ့ သူ့ပါတီဖြစ်တဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အက်တလီနဲ့ သူ့ရဲ့ လေဘာပါတီ အာဏာရလာခဲ့တယ်။ အက်တလီက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သဘောကျပေမယ့် ချာချီကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ရုန်းကန်မှုကို အတိုက်အခံပြုသူ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ချာချီဟာ ဗမာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး မကြာခင်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မယ်လို့ မလိုမုန်းထားစိတ်နဲ့ နိမိတ်ဆိုး ဖတ်ခဲ့သတဲ့။
ယုံချင်မှ ယုံကြလိမ့်မယ်၊ စစ်စည်းကမ်းကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က ဘရင်းဂန်းစက်သေနတ် အလက် ၂၀၀ နဲ့ အခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်း ကျည်ဆန်အပြည့်အစုံ ဂဠုန်ဦးစောကို ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေက ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလို လူသတ်စစ်လက်နက်တွေကို ထုတ်ပေးခဲ့ရတာလဲ? ဂဠုန်ဦးစောကကော လူပေါင်းများစွာကို လက်နက်တပ်ဆင်နိုင်လောက်တဲ့ စစ်လက်နက်တွေနဲ့ ဘာလုပ်မှာလဲ? ဒါတွေဟာ ဖုံးဖိမရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ဖြစ်တယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဘာကို ထင်ထင်ရှားရှား မီးမောင်းထိုးပြနေတာလဲဆိုတော့ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့အစိုးရ မားမားရပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပါပဲ။ ဦးစောဟာ သူ့လူတွေကို အပစ်အခပ်နဲ့ တခြား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကို ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားကန်မြောက်ဘက်က အမှတ် ၄ အေဒီလမ်းမှာရှိတဲ့ သူ့ရဲခြံဝင်းကြီးထဲမှာ ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာတင် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲသမိုင်းမှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် အကောင်းဆုံးနဲ့ အားလုံး တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့ရတဲ့ နေ့တနေ့ဟာ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ၆ လ အလိုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တော့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ကက်ဘိနက် အစိုးရဝန်ကြီးတွေဟာ စပတ်ခ်လမ်း (အခုတော့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း) မှာရှိတဲ့ အတွင်းဝန်ရုံးထဲမှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်တိတိမှာ အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ကြတယ်။ အစည်းအဝေးစပြီး မရှေးမနှောင်းလေးမှာပဲ ဗြိတိသျှတပ်မတော်အမှတ် (၁၂) စစ်ဝတ်စုံတွေ ဝတ်ဆင်ထားပြီး လက်နက်အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဦးစောရဲ့ သေနတ်သမားတွေဟာ ဂျစ်ကားတစီးနဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။
ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားကြတာမို့ လူသတ်သမားတွေဟာ အစိုးရဝန်ကြီးတွေ စည်းဝေးနေတဲ့ ခန်းမထဲကို အခက်အခဲမရှိဘဲ ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်း မဆိုင်းမတွဘဲ သေနတ်သမားတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ကျည်ဆန် ၁၃ တောင့် ထိမှန်လို့ ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ သူ့အသက်ဟာ ၃၂ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။
သခင်မြ၊ ဦးဘဝင်း၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ် (ခ) အဗ္ဗဒူရာဇာတ်၊ မန်းဘခိုင်၊ စပ်စံထွန်း၊ အတွင်းဝန်ဦးအုန်းမောင်နဲ့ သက်တော်စောင့် ရဲဘော်ကိုထွေးတို့ဟာ လုပ်ကြံသူတွေ ပစ်ခတ်တဲ့ ကျည်ဆန်တွေ ထိမှန်လို့ ကျဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဦးနု၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်ဇံဝေ၊ ပုဂံဦးဘဂျမ်း၊ ဦးကျော်ငြိမ်းနဲ့ စောစံဖိုးသင်တို့ ကံကောင်းထောက်မစွာ ဒဏ်ရာမရဘဲ အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံ ဆာဟူးဘာ့ရန့်ရဲ့ အစီအမံနဲ့ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မုဆိုးမအားလုံးကို ရူဘီငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ကို နစ်နာကြေးအဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဇနီးဒေါ်ခင်ကြည်နဲ့အတူ သားသမီး ၃ ဦးကို ထားရစ်ခဲ့ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးသမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးမှာ စုစုပေါင်း လူ ၉ ဦး အသက်ဆုံးပါးခဲ့ရတယ်။
ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးကို ချက်ချင်း ခေါ်ယူခဲ့ရပြီး ဦးနုကို အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌနေရာ တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။ ဦးနုဟာ အစိုးရတရပ်ဖွဲ့စည်းဖို့ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံရဲ့ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတယ်။ ဂဠုန်ဦးစောအိမ်ကို ပုလိပ်တွေက ညနေသုံးနာရီမှာ ဝိုင်းရံလိုက်ကြပြီး လုပ်ကြံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လက်နက်၊ စစ်အသုံးအဆောင်တွေနဲ့တကွ ဦးစောအပါအဝင် ကြံရာပါ လူသတ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့ဆောင်ခဲ့တော့တယ်။ (၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ဘန်ကောက်မြို့က ကြာဖြူကုမ္ပဏီက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဆရာခင်အောင် ရေးသားတဲ့ “အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ” စာအုပ်ကောက်နုတ်ချက်)။
ဘုရင်ခံ ဆာဟူးဘာ့ရန့်ဟာ အဖွဲ့ဝင် သုံးဦးပါတဲ့ အထူးတရားစီရင်ရေးခုံရုံးအဖွဲ့ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းစေခဲ့တယ်။ တရားသူကြီး ဦးကျော်မြင့်က ခုံရုံးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး စက်ရှင်တရားသူကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သာဂျော်နဲ့ ဦးစီဘူးတို့က အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးကို အင်းစိန် ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ထဲက အထူးတရားခုံရုံးမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်စစ်ဆေးစီရင်ခဲ့တယ်။
(၁) ဦးစော – လုပ်ကြံမှုစေခိုင်းသူ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
(၂) မောင်စိုး – လုပ်ကြံသူ သေနတ်သမား
(၃) သက်နှင်း – လုပ်ကြံသူ သေနတ်သမား
(၄) မောင်စိန် (ခ) စိန်ကြီး (ခ) လှအောင် – လုပ်ကြံသူ သေနတ်သမား
(၅) ရန်ကြီးအောင် (ခ) လှထွန်း – လုပ်ကြံသူ သေနတ်သမား
(၆) သုခ – ကြံရာပါ ကားမောင်းပို့သူ
(၇) ခင်မောင်ရင် – ကြံရာပါ
(၈) မောင်နီ (ခ) ဘိုနီ – ကြံရာပါ
(၉) မှုံကြီး (ခ) မောင်မှုံ – ကြံရာပါ။
ဦးစောအတွက် အံအားသင့်စေတဲ့ အချက်က သူတို့အုပ်စုထဲက ပညာအတတ်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် ဘညွန့်က အစိုးရသက်သေအဖြစ် ခုံရုံးရဲ့ သက်ညှာတဲ့ စီရင်ချက်ကို ယူခဲ့တယ်။ အမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ်စီရင်ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အသနားခံစာတင်ပြီးတဲ့နောက် ကြံရာပါတွေသာဖြစ်တဲ့ ခင်မောင်ရင်၊ သုခနဲ့ မောင်နီတို့ဟာ နှစ် ၂၀၊ တသက်တကျွန်းကို ပြောင်းလဲကျခံခဲ့ရတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဗမာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ ပေါက်ကွဲလုဆဲဆဲ ယမ်းအိုးကြီးတလုံးလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်သက်ရင့်နေတဲ့ ဒေါက်တာဘမော်တို့၊ သခင်ဗစိန်တို့က လက်ယာအုပ်စုတွေ ဖြစ်သလို ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့နဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက လက်ဝဲအုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဦးနုနဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီတွေကတော့ အာဏာနိုင်ငံရေးအတွက် လှုပ်ရှားနေချိန်မှာ စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ သူတို့အကြိုက်နဲ့ သူတို့ ဆန့်ကျင်ဘက် အုပ်စုနှစ်ဘက်လုံးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။
အပိုင်း (၁၁) ဆက်ရန် ……
The post ဗမာ့နိုင်ငံရေး ကသောင်းကနင်းများ (အပိုင်း ၁၀) appeared first on DVB.